China High -precision Moisture Analyzer ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Potentiometric Titrator > အစိုဓာတ်ထိန်းစက် > တိကျသောအစိုဓာတ်ထိန်းစက်
တိကျသောအစိုဓာတ်ထိန်းစက် isafully automatic volumetric Karl Fischer Moisture Analyzer with independent intellectual property rights designed and developed by the company. The instrument uses the volumetric titration method with Karl Fischer reagent as the standard solution as the analysis principle, combined with the latest mechanical and electronic design technology and humanized interface design, with good airtightness, low drift value and detection limit, wide measurement range, and high degree of automation , High precision, can be used to accurately analyze crystal water, adsorbed water, and free water in solid, liquid, and gas samples.
1. တိကျသောအစိုဓာတ်ထိန်းစက် Introduction
Product name: တိကျသောအစိုဓာတ်ထိန်းစက်
အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုတိုင်းတာခြင်း: 0.001%~ 100%(10ppm ~ 100%)
Titration ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှု: 0.2Î¼l
Titration function: PID သည် titration speed ကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သည်၊ drift သည်အလိုအလျောက် update လုပ်ပြီးအလိုအလျောက်နုတ်သည်။ အဆုံးမှတ်ကိုအလိုအလျောက်ထိန်းသိမ်းသည်။
အပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ - အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်၊ ကိရိယာအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်း၊ waste အရည်ပုလင်းအပြည့်သတိပေးချက်၊ အလိုအလျောက်အချက်အလက်တွက်ချက်မှု၊ ရလဒ်စာရင်းဇယားလုပ်ဆောင်ချက်၊
နှောင့်နှေးခြင်းသတ်မှတ်ခြင်း - မပျော်ဝင်နိုင်သောနမူနာများကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သလိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
Titration ပြန်လုပ်နိုင်မှု (RSD): ¥‰¥ ၉၉.၇% (2ml reagent)
တိုင်းတာချိန်: ပျမ်းမျှ ၃ မိနစ်;
ဒေတာလုပ်ဆောင်ခြင်း - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များကိုအလိုအလျောက်တွက်ချက်ခြင်း၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းသုံးစွဲမှု၊ ရေအရည်အသွေး၊ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်မှု၊ ppm စသည်တို့ကိုပြသသည်။
ဒေတာသိုလှောင်မှု: အုပ်စု ၁၂ ခု၊
တိုင်းတာမှုရလဒ်များ - အုပ်စု ၂၀၊
အဆို့ရှင်နှင့်ပိုက်လိုင်းပစ္စည်းများ: သုံးလမ်းနှစ်လမ်းမောင်းသံလိုက်ဓာတ်ထိန်းအဆို့ရှင်၊ သံချေးမတက်သောပိုက်လိုင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းပူးတွဲ
စစ်ဆင်ရေး interface: LCD display၊ navigation operation menu (တရုတ်ဗားရှင်း);
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: 110 ~ 220V (AC), 50 ~ 60Hz
အရွယ်အစား: 580 × 460 × 360mm
အလေးချိန်: 9.6 ကီလိုဂရမ်
2. တိကျသောအစိုဓာတ်ထိန်းစက် Parameter
Titration function ကို
PID အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှုန်း၊ အမြန်နှုန်းအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်နုတ်ယူခြင်း၊ အလိုအလျောက်ကိုင်ထားသည်
အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်၊ ကိရိယာအတည်ပြုခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ အမှိုက်အရည်ပုလင်းအပြည့်သတိပေးချက်၊ အလိုအလျောက်အချက်အလက်တွက်ချက်မှု၊ ရလဒ်စာရင်းဇယားလုပ်ဆောင်ချက်
မပျော်ဝင်နိုင်သောနမူနာများကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်မှုအရသတ်မှတ်ချိန်ကိုနှောင့်နှေးစေခြင်းနှင့် terminal နှောင့်နှေးခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်
Titration ပြန်လုပ်နိုင်မှု (RSD)
RSDâ‰¥ ၉၉.၇%ï¼› (2ml ဓါတ်ကူပစ္စည်း)
ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃ မိနစ်
အလိုအလျောက်တွက်ချက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များ၊ စားသုံးမှုစမ်းသပ်မှုပမာဏ၊ ရေအရည်အသွေး၊ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်မှု၊ PPM စသည်ဖြင့်ပြသည်
သုံးလမ်းနှစ်လမ်း solenoid drive control valve, anti -corrosion material pipeline and sealing joint
စစ်ဆင်ရေး interface ကို
LCD မျက်နှာပြင်ပြသမှု၊ လမ်းညွှန်လည်ပတ်မှုမီနူး
110 ~ 220V (AC) / 50-60Hz ဖြစ်သည်
3. တိကျသောအစိုဓာတ်ထိန်းစက် Feature And Application
ထိတွေ့လုပ်ဆောင်မှု၊ ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်၊ LED အရောင်အပြည့်အရည်ကြည်လင်ပြသမှု၊ titration မျဉ်းကွေး၏အချိန်နှင့်တပြေးညီပြသခြင်း၊ မီတာစုပ်စက်ထိုးသွင်းမှုပမာဏ၊ ထောက်လှမ်းမှုအချိန်၊ စားသုံးမှုဓာတ်ကူပစ္စည်းပမာဏ၊ လက်ရှိရေထုထည်
အပြည့်အ ၀ ဖုံးလွှမ်းထားသော titration cell ကိုသုံးပါ၊ system drift အလွန်နိမ့်သည်၊ solvent သည်အလိုအလျောက်အစားထိုးပြီးအဆိပ်ရည်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အစိုဓာတ်များစိမ့်ဝင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်စွန့်ပစ်အရည်ကိုထုတ်လွှတ်သည်။
၎င်းသည်စနစ်၏တိုင်းတာမှုရလဒ်များ၏တိကျမှုကိုသေချာစေရန် high-precision piston နှင့် titration ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကိုမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ပိုက်ပူးတွဲသည်အထူးအခွံမာသီးများနှင့်ဖျံများကို သုံး၍ ပုလင်းအဖုံးမျိုးစုံသည် reagent ပုလင်းအမျိုးမျိုးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အမျိုးမျိုးသော Karl Fischer ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကိုသုံးနိုင်သည်၊ မတူညီသော Karl Fischer ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏တိုင်းတာမှုရလဒ်များသည် ခွဲခြား၍ မရပါ။
အပြည့်အဝအလိုအလျောက်တိုင်းတာမှု၊ ရိုးရှင်းမြန်ဆန်ပြီးတိကျမှုသည်အလိုအလျောက်အရည်စုပ်ယူခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ရေစီးဆင်းမှုကိုအလိုအလျောက်တိုင်းတာခြင်း၊ ရေစုန်မျောခြင်းကိုအလိုအလျောက်နုတ်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျံ့လွင့်မှုကိုအလိုအလျောက်ခြေရာခံခြင်းနှင့်ရလဒ်များအလိုအလျောက်တွက်ချက်ခြင်း (နှိုင်းယှဉ်စံလွဲမှုသတ်မှတ်ချက်များ)
PID သည် titration အမြန်နှုန်းကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သည်၊ ပျမ်းမျှနမူနာစမ်းသပ်ချိန်သည် ၂ မိနစ်ထက်နည်းသည်။
အခွင့်အာဏာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်းကိုပံ့ပိုးပါ၊ GLP/GMP စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီလိုက်နာပါ။
အကွိမျမြားစှာဒေတာ interfaces (RS-2232C, USB, WEB interface);
အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များ - titration နှောင့်နှေးစေသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ အလိုအလျောက်အဆုံးသတ်အချက်နှောင့်နှေးစေသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ အသိဥာဏ်ချို့ယွင်းချက်စီရင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အမှိုက်အရည်ပုလင်းပြည့်လျှံနေသည့်သတိပေးချက်၊
တိုင်းတာမှုရလဒ်ယူနစ်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုး (ppm, %, ml, mgH2O), ရွေးချယ်နိုင်သောအနုစိတ် micro data printer, အပူ stirrer, ကက်ဆက်အပူမီးဖို, cassette headspace sampler, semiconductor refrigeration device, micro titration cell ။
4. Fields of use တိကျသောအစိုဓာတ်ထိန်းစက်
၎င်းသည်ရေနံ၊ ဓာတု၊ ဆေးဝါး၊ နေ့စဉ်ဓာတု၊ အစားအစာ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာ၏အစိုဓာတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုအပ်ချက်များတွင်ကျယ်ကျယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
Jiahangတိကျသောအစိုဓာတ်ထိန်းစက် has obtained CE certification, TART certification, ISO quality management system certification, more than 10 software copyrights and multiple patents to ensure that each instrument has stable performance and excellent quality.
မေး။ ။How many years have your company made တိကျသောအစိုဓာတ်ထိန်းစက်?
hot Tags:: တိကျသောအစိုဓာတ်ထိန်းစက်၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးသက်သာ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE